အချစ်ဦးကို ဘာလို့မေ့လို့မရတာလဲ? – Trend.com.mm
Posted on January 10, 2018 August 1, 2018 by Noel
လူတိုင်းမှာအချစ်ဦးကိုယ်စီရှိကြမှာပါ။အချစ်ဦးကို မြေးဦးရတဲ့အထိမမေ့ဘူးဆိုတဲ့ စကားတောင်ရှိပါတယ်။အချစ်သစ်တွေဘယ်လောက်ပဲပြောင်းပြောင်း အချစ်ဦးကို မေ့လို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူး။နောက်ဆုံးကိုယ့်ရဲ့လက်တွဲဖော်တစ်စုံတစ်ယောက်ကိုရှာဖွေတွေ့ရင်တောင် အကြောင်းတိုက်ဆိုင်ရင်သတိရနေမှာပါ။ဘာလို့ အချစ်ဦးကိုမေ့လို့မရတာလဲ?
အချစ်ဦးဆိုတဲ့အတိုင်း ပထမဆုံးရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားခဲ့ရတဲ့သူဖြစ်ပြီး ချစ်တဲ့သူနဲ့ အတူတူ လျှောက်သွားလျှောက်လာရတာက ပျော်ရွှင်စရာအချိန်တွေဖြစ်ခဲ့ကြတယ် မဟုတ်လား? ပထမဆုံးချစ်သူလည်းဖြစ်တဲ့အတွက် စိတ်ကူးယဉ်ထားတာတွေလည်းရှိခဲ့မှာဖြစ်သလို သူ့ကိုအသက်လောက်ချစ်တယ်ဆိုတဲ့အတွေးတွေလည်းရှိခဲ့မှာပါပဲ။
ဘယ်သူမဆို ကိုယ်ပထမဆုံးလုပ်တဲ့အလုပ်၊ပထမဆုံးရတဲ့လက်ဆောင်၊ ပထမဆုံး စာသင်ပေးတဲ့ဆရာမ၊ပထမဆုံးသွားဖူးတဲ့ခရီးစသဖြင့်ပထမဆုံးလုပ်ဖူးတဲ့အရာတွေကို လွယ်လွယ်နဲ့မေ့လို့မရပါဘူး။အချစ်ဦးကလည်းအတူတူပါပဲ။ပထမဆုံးချစ်ရတဲ့သူဖြစ်လို့ နောက်ထပ်အချစ်သစ်တွေ့ရင်တောင် စိတ်ထဲကအလိုလိုနှိုင်းယှဉ်မိနေဦးမှာပါ။ အချစ်သစ်နဲ့အပြင်သွားမယ်ဆိုရင်လည်းအချစ်ဦးနဲ့အတူတူသွားခဲ့ဖူးတဲ့နေရာဖြစ်နေရင် ခဏတော့ငေးငိုင်သွားမယ်ဟုတ်!ဒါက သစ္စာဖောက်တာမဟုတ်ပါဘူး။ယောကျာ်းလေးရော ၊မိန်းကလေးရော ဒီလိုခံစားချက်မျိုးခံစားဖူးမှာပါ။
အချစ်ဦးဆိုတဲ့ခံစားချက်က ကိုယ်အရမ်းကြိုက်တဲ့မုန့်ကို ပထမဆုံးအကြိမ်စားတုန်းက ပျော်ရွှင်သွားတဲ့ခံစားချက်လိုပါပဲ။ပထမဆုံးအကြိမ်စားဖူးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပိုပြီးမှတ်မှတ်ရရပျော်ရွှင်ပြီး နောက်တစ်ကြိမ်စားတဲ့အခါမှာတော့စားဖူးပြီးသားဖြစ်လို့ ပထမဆုံးအကြိမ်လောက် ၀မ်းသာပျော်ရွှင်တဲ့ခံစားချက်မျိုးရတော့မှာမဟုတ်ပါဘူး။
ပထမဆုံးအချစ်ဦးနဲ့အတူတူပျော်ရွှင်ခဲ့တဲ့အမှတ်တရတွေ၊သူ့အပေါ်ဘယ်လောက်ထိချစ်ခဲ့ဖူးတာ တွေ၊ပထမဆုံးအကြိမ် သူ့ကိုစနောက်ကျီစယ်ဖူးတာ၊သ၀န်တိုဖူးတာ၊ချုပ်ချယ်ဖူးတာ၊ဂရုစိုက်ဖူးတာ စသဖြင့် အကြောင်းတိုက်ဆိုင်တိုင်းအမှတ်ရနေမိကြပါတယ်။ တကယ်လို့အချစ်ဦးနဲ့ လမ်းခွဲခဲ့ရင်တောင် သူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတစ်ခုခုတော့ သိချင်နေကြတုန်းပဲမဟုတ်လား?
နောက်ဆုံး ဘ၀လက်တွဲဖော်နဲ့တွေ့ပြီးလက်ထပ်ခဲ့ရင်တောင် အချစ်ဦးကို တစ်ခါတစ်ရံ သတိရနေတတ်ပါတယ်။ဒါဟာ လက်ရှိဘ၀လက်တွဲဖော်ကိုမချစ်လို့၊ သစ္စာဖောက်တဲ့စိတ်မျိုးနဲ့ သတိရနေတာမဟုတ်ပါဘူး။ကိုယ့်ရဲ့ပထမဆုံးအကြိမ် အချစ်ဆိုတဲ့ခံစားချက်ဖြစ်ခဲ့ဖူးတာ ကိုပြန်ပြီးသတိရနေတာပါ။အဲ့ဒါကြောင့်အချစ်ဦးကိုမေ့ဖို့ဆိုတာ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။
ဘ၀လက်တွဲဖော်နဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာတော့ အချစ်ဦးတုန်းက ချစ်ခဲ့ဖူးတဲ့အချစ်လို ရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့ချစ်တဲ့အချစ်ထက် ရင့်ကျက်မှု၊နားလည်မှု၊မြတ်နိုးတန်ဖိုးထားမှု သံယောဇဉ်တွေနဲ့ပေါင်းစပ်ထားတဲ့အချစ်မျိုးကို ခံစားရမှာပါ။
အချစ်ဦးဆိုတာ အချစ်ဆိုတဲ့ခံစားချက်ဖြစ်လာအောင် ပထမဆုံးရင်ခုန်စေခဲ့သူမို့လို့ မေ့ဖို့လွယ်ပါ့မလား? သင်တို့ရော အချစ်ဦးကို မေ့ပြီလား?
လူတိုငျးမှာအခဈြဦးကိုယျစီရှိကွမှာပါ။အခဈြဦးကို မွေးဦးရတဲ့အထိမမဘေူ့းဆိုတဲ့ စကားတောငျရှိပါတယျ။အခဈြသဈတှဘေယျလောကျပဲပွောငျးပွောငျး အခဈြဦးကို မလေို့ရမှာမဟုတျပါဘူး။နောကျဆုံးကိုယျ့ရဲ့လကျတှဲဖျောတဈစုံတဈယောကျကိုရှာဖှတှေရေ့ငျတောငျ အကွောငျးတိုကျဆိုငျရငျသတိရနမှောပါ။ဘာလို့ အခဈြဦးကိုမလေို့မရတာလဲ?
အခဈြဦးဆိုတဲ့အတိုငျး ပထမဆုံးရငျခုနျစိတျလှုပျရှားခဲ့ရတဲ့သူဖွဈပွီး ခဈြတဲ့သူနဲ့ အတူတူ လြှောကျသှားလြှောကျလာရတာက ပြျောရှငျစရာအခြိနျတှဖွေဈခဲ့ကွတယျ မဟုတျလား? ပထမဆုံးခဈြသူလညျးဖွဈတဲ့အတှကျ စိတျကူးယဉျထားတာတှလေညျးရှိခဲ့မှာဖွဈသလို သူ့ကိုအသကျလောကျခဈြတယျဆိုတဲ့အတှေးတှလေညျးရှိခဲ့မှာပါပဲ။
ဘယျသူမဆို ကိုယျပထမဆုံးလုပျတဲ့အလုပျ၊ပထမဆုံးရတဲ့လကျဆောငျ၊ ပထမဆုံး စာသငျပေးတဲ့ဆရာမ၊ပထမဆုံးသှားဖူးတဲ့ခရီးစသဖွငျ့ပထမဆုံးလုပျဖူးတဲ့အရာတှကေို လှယျလှယျနဲ့မလေို့မရပါဘူး။အခဈြဦးကလညျးအတူတူပါပဲ။ပထမဆုံးခဈြရတဲ့သူဖွဈလို့ နောကျထပျအခဈြသဈတှရေ့ငျတောငျ စိတျထဲကအလိုလိုနှိုငျးယှဉျမိနဦေးမှာပါ။ အခဈြသဈနဲ့အပွငျသှားမယျဆိုရငျလညျးအခဈြဦးနဲ့အတူတူသှားခဲ့ဖူးတဲ့နရောဖွဈနရေငျ ခဏတော့ငေးငိုငျသှားမယျဟုတျ!ဒါက သစ်စာဖောကျတာမဟုတျပါဘူး။ယောကျြားလေးရော ၊မိနျးကလေးရော ဒီလိုခံစားခကျြမြိုးခံစားဖူးမှာပါ။
အခဈြဦးဆိုတဲ့ခံစားခကျြက ကိုယျအရမျးကွိုကျတဲ့မုနျ့ကို ပထမဆုံးအကွိမျစားတုနျးက ပြျောရှငျသှားတဲ့ခံစားခကျြလိုပါပဲ။ပထမဆုံးအကွိမျစားဖူးတာဖွဈတဲ့အတှကျပိုပွီးမှတျမှတျရရပြျောရှငျပွီး နောကျတဈကွိမျစားတဲ့အခါမှာတော့စားဖူးပွီးသားဖွဈလို့ ပထမဆုံးအကွိမျလောကျ ဝမျးသာပြျောရှငျတဲ့ခံစားခကျြမြိုးရတော့မှာမဟုတျပါဘူး။
ပထမဆုံးအခဈြဦးနဲ့အတူတူပြျောရှငျခဲ့တဲ့အမှတျတရတှေ၊သူ့အပျေါဘယျလောကျထိခဈြခဲ့ဖူးတာ တှေ၊ပထမဆုံးအကွိမျ သူ့ကိုစနောကျကြီစယျဖူးတာ၊သဝနျတိုဖူးတာ၊ခြုပျခယျြဖူးတာ၊ဂရုစိုကျဖူးတာ စသဖွငျ့ အကွောငျးတိုကျဆိုငျတိုငျးအမှတျရနမေိကွပါတယျ။ တကယျလို့အခဈြဦးနဲ့ လမျးခှဲခဲ့ရငျတောငျ သူနဲ့ပတျသကျပွီးတဈခုခုတော့ သိခငျြနကွေတုနျးပဲမဟုတျလား?
နောကျဆုံး ဘဝလကျတှဲဖျောနဲ့တှပွေီ့းလကျထပျခဲ့ရငျတောငျ အခဈြဦးကို တဈခါတဈရံ သတိရနတေတျပါတယျ။ဒါဟာ လကျရှိဘဝလကျတှဲဖျောကိုမခဈြလို့၊ သစ်စာဖောကျတဲ့စိတျမြိုးနဲ့ သတိရနတောမဟုတျပါဘူး။ကိုယျ့ရဲ့ပထမဆုံးအကွိမျ အခဈြဆိုတဲ့ခံစားခကျြဖွဈခဲ့ဖူးတာ ကိုပွနျပွီးသတိရနတောပါ။အဲ့ဒါကွောငျ့အခဈြဦးကိုမဖေို့ဆိုတာ မဖွဈနိုငျပါဘူး။
ဘဝလကျတှဲဖျောနဲ့တှတေဲ့အခါမှာတော့ အခဈြဦးတုနျးက ခဈြခဲ့ဖူးတဲ့အခဈြလို ရငျခုနျစိတျလှုပျရှားမှုတှနေဲ့ခဈြတဲ့အခဈြထကျ ရငျ့ကကျြမှု၊နားလညျမှု၊မွတျနိုးတနျဖိုးထားမှု သံယောဇဉျတှနေဲ့ပေါငျးစပျထားတဲ့အခဈြမြိုးကို ခံစားရမှာပါ။
အခဈြဦးဆိုတာ အခဈြဆိုတဲ့ခံစားခကျြဖွဈလာအောငျ ပထမဆုံးရငျခုနျစခေဲ့သူမို့လို့ မဖေို့လှယျပါ့မလား? သငျတို့ရော အခဈြဦးကို မပွေီ့လား?
Posted in Lifestyle, Relationships
အရမ်းမိုက်ပြီး တကယ်ထိရောက်တဲ့ သတိပေးစာများ
မျှော်လင့်ချက်တွေမရှိတော့ဘူးလို့ ခံစားရရင် ဒီနည်းလမ်းကိုကြိုးစားကြည့်ပါ